ACME Pet Shop Izilwane Villafranca Messina
Isitolo se-ACME Pet - Villafranca Tirrena
Izilwane nokuphakelwa eVillafranca Tirrena
Isitolo sezilwane zasekhaya i-ACME, ngo nge-Antonello da Messina 70 - 72, a I-Villafranca Tirrena, Isitolo sezilwane zasekhayaphakathi kwezimpawu ezaziwa kakhulu futhi ezihlonziwe kunazo zonke endaweni yaseTirrheni, inkampani ekhethekile Ukuthengiswa kokudla Okucacile kusuka kwimikhiqizo emihle kakhulu, Ukudla Kwezilwane Nezesekeli, enikela eyodwa Iseluleko esifanelekile ukunakekelwa nenhlalakahle yesilwane sakho esifuywayo.
Da Isitolo sezilwane zasekhaya i-ACME uzothola okungcono kakhulu emakethe ngakho konke okudingekayo ekutholeni okunempilo kanye nokuphila kahle kwengqondo yabangane bakho abanezinyawo ezine!
I-ACME Pet Shop - Ukudla Okunesondlo Nempilo Yezilwane okokuqala
Isitolo sezilwane zasekhaya i-ACME, a I-Villafranca Tirrena, indawo enhle ongaphendukela kuyo ukuze uthole okungcono kakhulu Imikhiqizo Yokudla labangane bakho Animali. E-ACME Pet Shop, empeleni, unokukhetha okubanzi kakhulu Ukudla nokondla, futhi ebekiwe ngeminyaka noma umjaho, wemikhiqizo engcono kakhulu emakethe nangamanani athakazelisa kakhulu! Okwezilwane ezifuywayo, noma ngokuzalanisa kwakho, khetha ubungcweti kanye nesipiliyoni se-ACME Pet Shop ebikade ikhetha phezulu kokondla izilwane.
Phakathi kwemikhiqizo eyaziwayo neqinisekisiwe ephethwe yiPet Shop kukhona: I-Royal Canin, i-Eukanuba, i-Hill's, i-Eukanuba, ne-Camon nabanye abaningi. Ngenxa yothando lwezilwane nomdlandla womsebenzi wabo, abasebenzi be-ACME Pet Shop bahlala benolwazi ngazo zonke izindaba ezikhona emkhakheni wezokudla nezempilo zabangani bakho abanezinyawo ezine futhi ubelokhu ezibophezele ukukunikeza into engathi sína Iseluleko esikhethekile sokukuqondisa ekukhetheni ukudla okulungele kakhulu noma ukondla ngokwezidingo zabo.
ACME Pet Shop - Imikhiqizo kanye Nezesekeli zezilwane ezifuywayo
Isitolo sezilwane zasekhaya i-ACME, ngo-Antonello da Messina 70, a I-Villafranca Tirrena, a Isitolo sezilwane zasekhaya okuyikho futhi okuphathelene nezindatshana ezahlukahlukene kanye nezesekeli zezilwane, njengamathoyizi, amaKennels, ama-Carriers, ama-Leashes, ama-Grooming accessories ngamanani amahle. Konke okudingeka ube nakho ekhaya ukuze unakekele abangane bakho abanezinyawo ezine kungatholakala e-ACME Pet Shop okuthi, ngenxa yokukhetha okubanzi, ukulungiswa okukhulu kwabasebenzi kanye nesipiliyoni esitholwe ngaphezu kweminyaka yokuba khona komkhakha wezentengiso we Imikhiqizo kanye nokuphakelwa kwezilwane, yiphuzu okubhekiselwa kulo kubo bonke abanaka ukunakekelwa kwenhlalakahle yezilwane zabo.
ACME Pet Shop - Ikhwalithi ne-Specialised Consulting
Isitolo sezilwane zasekhaya i-ACME, a I-Villafranca Tirrena, uyikhathalela ngempela impilo kanye nokudla okulungile kwezilwane zakho, yingakho uzibophezele ukukusiza ukuba uzinakekele kakhulu Ukudla nokondla ngikhona emakethe futhi ngikunikeze nganoma yisiphi isikhathi izeluleko ezikhethekile zempilo yabangane bakho abanezinyawo ezine. Isitolo sezilwane zasekhaya i-ACME Pet Shop sikulindile ukuthi sikwenze uthole ukuthi kulula kangakanani ukunakekela izilwane ezifuywayo: vele uthembele kochwepheshe!
Ikheli: Nge-Antonello da Messina 70 - 72
Idolobha: I-Villafranca Tirrena
I-POSTAL CODE: 98049
Ucingo: 090 337067
Umakhala ekhukhwini: 347 6208032
Inombolo ye-VAT: 01801490838